Buy WONDER HOME Two Door No Frost Refrigerator 282 Liter (WHF-NF-282L ) Online in Myanmar | Spree.com.mm
WONDER HOME Two Door No Frost Refrigerator 282 Liter (WHF-NF-282L )
Two Doors No Frost Refrigerator
T Class 18-43°C
Black plastic sheet, VCM Finishing, Internal Condenser, Reversible Door, Adjustable Leg, Mechanical, Temp. Control, Antibacterial gasket, Total No Frost
Glass shelf, Vegetable glass crisper, Transparent door racks, Interior Lamp
Wire freezer shelf, Ice maker, Transparent door rack
Frost-Free Technology ( No Frost)
600 * 650 * 1513 MM
655 * 716 * 1589 MM
Warranty Condition - First 1 year for Service and Spare Parts and Next2years for Service only.
Wonder Home ဆိုတာ ဘာလဲ
ကျွနု်ပ်တို့နေစဉ်ထိတွေ့သုံးစွဲနေသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြင့်ပင် ပျော်ရွှင်မှု၊ အံ့အားသင့်မှု နှင့် သာယာကြည်နူးမှုများကို ဖန်းတီးနိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောပျော်ရွှငျွ်၊ အံ့အားသင့်မှု နှင့် သာယာကြည်မှုများကို လူကြီးမင်းများထံ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့Wonder Home မှ တာဝန်ယူပါရစေ။
Wonderhome ထုတ်ကုန်များသည် မိသားစုအတွက် သန့်ရှင်း၍သက်သောင့်သက်သာရှိသော နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီးအရသာရှိသော စားစရာများကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နိုင်သကဲ့သို့ မိမိအချစ်ရဆုံးသူများနှင့် ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်များကို ခံစာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော တန်ဖိုးရှိသည့်အခိုက်အတန့်လေးများကို wonder Homeနှင့်အတူ လူကြီးမင်းများအား မျှဝေခံစားစေချင်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ အခြေစိုက်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၌ ရုံးခွဲများရှိပါသည်။ Wonder Home ထုတ်ကုန်များသည် အတွေ့အကြုံအသစ်များနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။ အိမ်သုံး အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အပူအပင်ကင်းသည့် ရိုးရှင်းသောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏စိတ်ထဲ အတွေးထဲ တွင်ရှိသော စိတ်ကူးပုံစံများနှင့်ထပ်တူညီစေရန် ကျွနု်ပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ပုံစံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ခေတ်အမီဆုံးနှင့် ergonomic ဒီဇိုင်းများဖြစ်သောကြောင့် Best-in-class ထုတ်ကုန်များလည်းဖြစ်ပါသည်။ Functions များလည်းစုံလင်သည့်အပြင် user-friendly လည်းဖြစ်ပါသည်။ ရိုးသားစွာပြောရလျှင် Wonder Home သည် လူကြီးမင်းများ၏ဘဝကို Wonderful Life လေးများ ဖြစ်စေရန် အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။
Spacious All-Around Cooling
The WHFNF282L Double-Door Frost-Free Top Mount Freezer featuresawhopping 282-litre storage capacity with U-shaped cabinets andamulti-layer partition system of4high-load bearing shelving racks. It provides all-around optimized cooling which maintains moisture and regulates the mixing of odours between each compartment.
The fifth-generation automatic defrosting technology delivers quick and thorough air circulation to every corner of the refrigerator’s interior to prevent excess moisture build-up and frosting between food items and on the inner walls. This ensures that food items do not stick together and stay fresh longer.
Perfect for Farm Fresh Foods
Rated Climate Class T, the WHFNF282L is optimized to deliver quick cooling and freezing even in the harshest tropical climates (18-43°C).Fresh foods stay crisp and farm-fresh longer with the moisture-lock crispers while ice making is easy and fuss-free with the twist-type icemaker.
Smooth Stabilizer-Free Operation
The WHFNF282L is fitted withavoltage stabilizer to counter any voltage fluctuations and prevent electrical damage or shorting to ensure smooth and consistent operation.It is super quiet (42dBA) and comes with antibacterial gaskets and functional adjustable legs.